I-condo ephephile, evikelekile futhi enokuthula endaweni yaseClifton. - I-Airbnb
I-condo ephephile, evikelekile futhi enokuthula endaweni yaseClifton.
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Parvez
Indawo emaphakathi. Ukuphepha okungu-24/7 ngamakheshi anesivinini esikhulu. I-Safe & Serene luxury condo ku-9th Floor enokubukwa okumangalisayo kokushona kwelanga endaweni yokuhlala yaseClifton-posh yaseKarachi. Izikhungo eziningi zokuthenga ngaphakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo. Amaminithi okuya eClifton Beach naseBoat Basin kanye nezindawo zokudlela eziningi ezinhle nemisebenzi yangaphandle. Imizuzu engama-45 ukuya esikhumulweni sezindiza samazwe omhlaba kanye nemizuzu eyi-15 ukuya esiteshini esikhulu sesitimela.
Amakheshi ashesha kakhulu ukufika kupenthouse ephezulu yesitezi sesi-9.
Indawo yokupaka yamahhala engaphansi komhlaba yokulanda nokudiliva.
24/7 Ithimba lezokuphepha eliphezulu kanye nelokulungisa ezakhiweni.
Ukwakhiwa okusha. Yehla uye endaweni yemakethe yaseGulf & Cliff.
Ukuhamba ibanga lokuya esitolo esikhulu sika-Aga nezinye izitolo eziningi.
Isendaweni emaphakathi endaweni yase-posh Clifton rIight nguTeen Talwar endaweni ephakeme enezindawo eziningi zokuthenga neplaza ebangeni lokuhamba. IClifton Beach, iHyperStar Mall, Indawo yokudlela Enhle kanye nezindawo zokudlela ze-Boat Basin's 24/7 phakathi kwemizuzu emi-5-10 ukusuka.
Inqwaba yezithuthi zomphakathi, orisho, amatekisi atholakalayo njengoba uphuma efulethini.
I-Karachi Gymkhana, i-Karachi Club, i-Sind Club kanye nawo wonke amahhotela ezinkanyezi ezi-5 phakathi nokushayela okungu-5-10.
I-Main Saddar Shopping Centre iqhele ngamaminithi angu-10-15.
Isikhumulo sezindiza siqhele ngamaminithi angu-35-45. Ichweba laseKemari lokudoba nokuhamba ngesikebhe cishe imizuzu engama-20 ukushayela.
Izilimi: العربية, English, हिन्दी